All News Collection Happened in Rakhine: May 2013
ဖစ်သော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ(RNDP)နှင့် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ALD) တို့တစ်ပါတီအဖြစ်ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းရေးကို အလေးအနက်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုသည်။
၂။ ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်း၊ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း၊ ရေနံနှင့်ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်း များနှင့်ပတ်သက်၍ ရမ်းဗြဲကျွန်းနေ(သို့)စီမံကိန်း ဧရိယာအတွင်းရှိဒေသခံတို့၏သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်နှင့် မဒေးကျွန်းနေ လူထု၏ တက်ကြွ၊ လှုပ်ရှား၊ ညှိုနှိုင်း တောင်းဆိုမှုများအပေါ် အလေးအနက်ထောက်ခံသည်။
၃။ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ပဋိပက္ခအခြေအနေအရ၎င်း၊ ဘင်္ဂလီများ၏ အတွင်းစိတ်သဏ္ဍန် မမှန်ကန်မှုအရ၎င်း၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကျေးဇူးသစ္စာကို စောင့်သိရိုသေမှု မရှိ၍၎င်း၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဘင်္ဂလီများ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အုန်းတောကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လူထုဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ခဲ့ခြင်းအား အလေးအနက်ထောက်ခံသည်။
၄။ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းရှိ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အစရှိသည်တို့အား မြို့နယ်ပြည်သူများ၊ အင်ဂျီအိုအဖွဲ့များ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူးတွဲ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်သွားမည်။
၅။ ကျောက်ဖြူဒေသနှင့်ပတ်သက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင် ဒေသခံတို့၏သဘောထားကိုကြိုတင် ရယူပြီးမှ ဆုံးဖြတ်စေလိုသည်။
၆။ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီသည် အတွေးသစ်၊အမြစ်သစ်၊ ရှေးလုပ်ငန်းစဉ်သစ်များ နှင့်အညီ၊ ရခိုင်အမျိးသားအရေးကို ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ဝင်စားသူဟူသမျှကို လက်ကမ်းကြိုဆိုသည်။
၇။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတို့က ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ကာ တရားဝင်နိုင်ငံသား မဟုတ်သူများကိုစည်းရုံးလျှက် ပါတီဝင်အဖြစ်လက်ခံခြင်းနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းတို့ကို လုံးဝ ကန့်ကွက်သည်။
၈။ ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွါးရေးဇုံစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းစီမံကိန်းအပေါ် တဖက်သက်ဆန့်ကျင်းခြင်းမဟုတ်၊ မူသဘောအရ ထောက်ခံကြိုဆိုပါသည်။ ရမ်းဗြဲကျွန်းနေပြည်သူများ၏အခြေအနေမှာ ဤမျှလောက်ကြီးမား သော ၎င်းစီမံကိန်းကြီးနှင့်ပတ်သက်၍ဆိုးကျိုး/ကောင်းကျိုးမျုားအား သိနိုင်စွမ်းအားမရှိသေးပါ။ နှစ်အနည်းငယ် စောနေသေးသည်ဟု ရှုမြင်သုံးသပ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဤမျှကြီးကျယ်သော လုပ်ငန်းပမာဏကို ယာယီဆိုင်းငံ့ထားပြီး အထူးစီးပွါးရေးဇုံစီမံကိန်းမစတင်မီ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လျှပ်စစ်မီး၊ ရေ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စသောလိုအပ်ချက်များနှင့် အခြားအခြေခံကျသော စိုက်ပျိုးရေး၊ စက်မှုလက်မှု၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း စသော စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုတိုးတက်အောင်ပထမဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်းတိုက်တွန်းသည်။
၉။ “ရခိုင်အမျိုးသားနေ့” နေ့ရက်ရွေးချယ်သက်မှတ်ရေး ဆောင်ရွက်နေမှုအား ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးရှိ မြို့နယ်အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးကြပြီး ရခိုင့်နေ့ထူးနေ့မြတ်တနေ့တွင် အတည်ပြုထုတ်ဖေါ်ကြေငြာပေးရန်တိုက်တွန်းသည်။
၁၀။ ရခိုင့်စာပီ (မူလတန်းအဆင့်)သင်ရိုးအား အလျှင်အမြန် ပြဌါန်းသင်ကြားနိုင်ရေးကို အလေးအနက်အားပေးတိုက် တွန်းသည်။
၁၁။ ရခိုင်အမျိုးသမီးနေ့တစ်နေ့ရွေးချယ်ကြရာတွင် ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ကျောက်နီမော်၊ ချောင်းဝအုပ်စု၊ သပြေချောင် ရွာသူ မသီတာထွေး ကျဆုံးသော မေ ၂၈၊ ၂၀၁၂-ခု၊ (မေ -၂၈)နေ့ကိုရွေးချယ်ထောက်ခံသည်။
၁၂။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ ဗဟိုဌါနချုပ်မှ ဒီမိုကရေစီကျကျ ချမှတ်ထားသော ဆုံးဖြစ်ချက်များအပေါ် တသွေမတိန်းလိုက်နာလုပ်ဆောင်သွားမည်။
၁၃။ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်း အဓမ္မ သိမ်းယူထားခြင်းခံရသော လယ်ယာမြေကိစ္စများဖြေရှင်းရေးတွင်အစွမ်းကုန် ကူညီမည်။
၁၄။ ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးနှင့် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ ရန်ပုံငွေအတွက် ဖားကန့်မြို့ ရခိုင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းမှ အလှူငွေ (၅၀၀၀၀၀) ငါးသိန်းကျပ်၊ ဖားကန့်မြို့ ရခိုင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအသင်း ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးဖိုးနုအောင်မှ အလှူငွေ (၁၀၀၀၀၀၀) ဆယ်သိန်းကျပ်၊ ဇေယျာအောင် ကုမဏီအလှူငွေ (၂၀၀၀၀၀) နှစ်သိန်းကျပ် နှင့်အခြားအလှူရှင်များအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းမှတ်တင်ဂုဏ်ပြု အပ်ပါသည်။
(သတင်းအရင်းအမြစ်- Coral Arakan News ၏ Facebook စာမျက်နှာ)
Posted by Than Htoon at 7:05 PM
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အုပ်စု နှစ်ခုကြား အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှုများကို အကြောင်းပြု၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရှိ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုများမှာ ဖိအားပေး ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ဝင်ရောက်လာလျက်ရှိကြောင်း ဒုက္ခသည်များနှင့် ကူညီ စောင့်ရှောက်နေသူများက ပြောသည်။
ဝင်ရောက်လာသူများမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ရွာတော်ခရိုင်မှ အများစု ဖြစ်ပြီး စစ်တကောင်းခရိုင်နှင့် ရင်ဂါမာတီခရိုင်
တို့မှလည်း ပါဝင်သည်။ လက်ရှိတွင် မောင်တောနှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ်များတွင် ၎င်းတို့ ခိုလှုံ နေထိုင်လျက် ရှိကြသည်။
“မနှစ်က ဇွန်လမှာ ရခိုင်အရေးအခင်း ဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာ ၄ ရက်နေ့မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနေ ရခိုင်တွေ
မောင်တောကို စဝင်တယ်။ ဒီဘက်မှာ ဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခကို အခြေခံပြီးတော့ အဲဒီမှာနေတဲ့ ရခိုင်မျိုးနွယ်စု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအရ ဖိနှိပ် ခြိ်မ်းခြောက်မှုတွေ လုပ်လာတာကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကို ဝင်ရောက် ခိုလှုံလာကြတာ ဖြစ်တယ်” ဟု မောင်တောမြို့၊ ဗဟိုကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဦးအာစရ က မိန့်ကြားသည်။
ဆရာတော်က ဆက်လက်၍ “မောင်တောမြို့နယ် တခုထဲထဲမှာ ရောက်နေတဲ့ ဒုက္ခသည် စာရင်းကတော့ အိမ်ထောင်စု
၂၅၇ စု၊ ကျား ၅၂၀၊ မ ၅၄၇ ဦး ရှိတယ်။ အစောပိုင်းမှာ WFP က ဆန် အနည်းအကျဉ်း လှူခဲ့သေးတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီလူတွေကို ဒုက္ခသည် မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး ရပ်ပစ်တယ်။ လောလောဆည် ဒုက္ခသည်တွေ ကို နတလ ရွာတွေမှာ ထားတယ်။ ဗဟိုကျောင်းမှာတော့ အိမ်ထောင်စု ၂၉ စု ကျန်နေသေးတယ်။ ဆက်ပြီး
ရောက်လာနေဆဲ ဖြစ်တယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို မိန့်ကြားသည်။
၎င်းထွက်ပြေးလာရပုံကို မောင်တောမြို့ ဗဟိုကျောင်းတွင် ခိုလှုံနေသော ရွာတော်ခရိုင်၊ လမမြို့နယ်၊ အုန်းတပင်ရွာမှ ဦးမောင်ပုချေ က “ကျနော်တို့ ထွက်ပြေးမှာကို ကြိုသိလို့ (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်) အာဏာပိုင်တွေက လမ်းတွေကို ပိတ်ဆို့ထားတယ်။ ည ၈နာရီလောက်မှာ ကျနော်တို့ ရခိုင်စုစုပေါင်း ၁၅ ယောက်ဟာ တယောက် လမ်းကြောင်း
တခုစီနဲ့ ရွာကနေ ခိုးထွက်ပြီး လမ်းမှာ ဆုံတယ်။ ညအမှောင်ထဲမှာ တောလမ်းက ဖြတ်ကြရတယ်။ လုံခြုံရေးနဲ့ မတွေ့အောင် ရှောင်ပြီး နှစ်ရက်တိုင်တိုင် လာခဲ့ရတယ်” ဟု ဆိုသည်။
၎င်းတို့ နေထိုင်ခဲ့ရာအရပ်တွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အဓမ္မမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ “ဒေသ အာဏာပိုင်တွေက ကျနော်တို့ ရခိုင်တွေကို မူဆလင်ဘာသာကို အတင်းဝင်ခိုင်းတယ်။
ယောက်ျားတွေကို အဓမ္မ တောက်ကျာ ဆောင်းခိုင်းတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ခွင့် မရဘူး။ မိန်းမတွေကိုလည်း ဆာရီ ဝတ်ခိုင်းတယ်။ အဲလိုမလုပ်ရင် ပြဿနာလုပ်တယ်။ မိန်းခလေးတွေ ကိုလည်း ကိုယ်ထိလက်ရောက်
စော်ကားကြတယ်။ အာဏာပိုင်တွေကို တိုင်ပြန်တော့လည်း ဘာမှလုပ်မပေးဘူး” ဟု ကျောက်တော်မြို့၊
ရွှေကျောင်း၌ ခိုလှုံနေသော ရင်ဂါမာတီမြို့နယ်၊ ပါးလူရွာမှ ဦးဆိုးရီ က ပြောသည်။
အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အများစုရှိရာ မောင်တောမြို့တွင် မနေဘဲ ကျောက်တော်မြို့အထိ ၇၄ ဦး ရောက်ရှိ လာကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသမီးကွန်ယက်မှ ဒေါ်ညိုအေး က ပြောသည်။
“ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူမှုကွန်ယက်များ၊ ရခိုင်မျိုးသမီး ကွန်ယက်တို့က ကူညီ စောင့်ရှောက်နေပါတယ်။ ပြည်နယ် အစိုးရကလည်း လာရောက် အားပေးစကားပြောပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
မောင်တော ဗဟိုကျောင်းနှင့် မြို့နယ်တွင်း အခြားဒုက္ခသည်စခန်းတွင်လည်း ပြည်နယ်အစိုးရ အပါအဝင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက လာရောက်လှူဒါန်းနေပြီး မိုးတွင်း၌ ဒုက္ခသည်များ စားသောက်ရေး အကူအညီများ ထပ်မံလိုအပ်နေကြောင်း ဆရာတော် အာစရ က အမိန့်ရှိထားသည်။
၎င်းဒုက္ခသည်များအား ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာရုံး UNHCR က တရားဝင် ဒုက္ခသည်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်
နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေသည်ဟု သွားရောက်ကူညီနေသည့် ဝံလက် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဒါရိုက်တာ ဦးဇော်ဇော်ထွန်း က ဝေဖန်လိုက်သည်။
“ဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့ ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒီဒုက္ခသည်တွေအပေါ်မှာ UNHCR အနေနဲ့ကူညီ ဆောင်ရွက်ဖို့ ငြင်းဆန်နေ တာဟာ တရားမျှတမှု မရှိသလို ဖြစ်နေတယ်။ တဖက်နိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေးချိုး ဖောက်ခံရပြီး နည်းမျိုးစုံနဲ့
ရောက်လာသူတွေကို ပြည်နယ်အစိုးရက လူသားချင်း စာနာမှုအပြည့်နဲ့ ခိုလှုံခွင့်ပေးနေချိန်မှာ ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းက ဒီလို တာဝန်မဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး လုပ်နေတဲ့အပေါ် အလွန်ပဲစိတ်ပျက်မိတယ်” ဟု
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြန်ကြားရေးနှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ဆပ်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြိုင် ကလည်း
“ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီဒုက္ခသည်တွေ အမိုးအကာအောက်မှာ ကောင်မွန်စွာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် တတ်နိုင်သမျှ
စီစဉ်ပေးနေပါတယ်။ ဒါဟာ အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာကြောင်းပြသခြင်း ဖြစ်သလို၊ လူသားချင်း စာနာမှုကိုလည်း ဖော်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
ရခိုင်မျိုးနွယ်စုများမှာ ယခု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ မပေါ်ပေါက်မီကတည်းကပင် အဆိုပါဒေသ၌ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရပ်တည်နေထိုင်လာခဲ့ပြီး ယခုအခါ စစ်တကောင်း၊ ဖလောင်းချိတ်၊ ဗောဓိသျှ၊ ပေါက်တောခလီ၊ ဖခရာရှိုးရိ၊ ရင်ဂါမာတီ၊ ရွာတော် ခရိုင်နှင့် အခြားဒေသများများတွင် ယနေ့တိုင် နေထိုင်လျက်ရှိကြကြောင်း ရခိုင်သမိုင်း သုတေသီ အရှင်ပညာစာရ က ဆိုသည်။
(သတင်းအရင်းအမြစ်- မဇ္ဈိမ၊ ရေးသားသူ- သိန်းလှိုင်)
Posted by Than Htoon at 6:54 PM
ကျွန်းပြန်ရဲဘော် ခိုင်ဓညလင်း၏ မိခင်ကွယ်လွန်
(ခိုင်ဓညလင်း မိခင် သေဆုံးမူ အပေါ် မိသားစုနှင့် ထပ်တူ ၀မ်းနည်းကြောင်း ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။/ နိရဉ္စရာ သတင်းဌာန)
(ခိုင်ဓညလင်း၏ မိခင်ကွယ်လွန်မှုအပေါ် မိသားစုနှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း- ရခိုင်သတင်းများစုစည်းမှုဘလော့ဂ်)
Posted by Than Htoon at 9:36 AM
ရှမ်းတွေလည်း လူရိုင်းတွေ ဖြစ်ကုန်တော့မယ်
ရခိုင်အရေးအခင်း ဖြစ်တုန်းက ပြဿနာရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို အသေအချာ မလေလ့ာဘဲ ရခိုင်တွေကိုဘဲ တဘက်သတ် လူရိုင်းတွေ၊ မယဉ်ကျေးသူတွေ၊ ရန်လိုသူတွေ အဖြစ် သတင်းဌာနကြီး တချို့က ပုံဖေါ် ပြောဆိုိခဲ့တာတွေ ရှိသလို၊ အဖွဲ့အစည်း တချို့၊ လူပုဂ္ဂိုလ် တချို့ကလည်း ဒီလိုဘဲ ထပ်တူ ပြောဆိုမူတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက ရခိုင်ဘက်မှာ ပြဿနာတွေနဲ့ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်နေတဲ့ အတွက် ဘာမှ တုန့်ပြန် မပြောခဲ့ဘဲ တိတ်တိတ်ကလေးသာ နေခဲ့ပါတယ်။ ပြောချင်စရာတွေက ရင်ထဲ အပြည့်ပါ။ ပြန်ပြောရင်လည်း အင်အားနည်းနေတဲ့ ရခိုင်တွေကိုဘဲ အပြစ်တွေ ထပ်တင်လာကြမှာမို့ ဆိတ်ဆိတ် ကလေး နေခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြဿနာပြီးတော့ မိတ္ထိလာမှာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီကတဆင့် နေရာ အတော်များများကို ကူးစက် ပျံ့နှံ့ပြီး ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီး အနောက်ခြမ်း နေရာတချို့နဲ့ ဥက္ကံမြို့မှာ ထပ်ဖြစ်တယ်။ အခု တစ်ခါ ရှမ်းပြည်နယ် လားရှိုးမှာ ထပ်ဖြစ်တယ်။
ပြောချင်တာကတော့ ရခိုင်တွေကို ဘင်္ဂါလီ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်တွေနဲ့ အဓိဂရုဏ်းတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အရိုင်းတွေ၊ မယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေ၊ ရန်လိုသူတွေလို့ အဲသလိုမျိုး ပုံဖေါ် စွပ်စွဲ သတ်မှတ်ရင် ဗမာတွေကော ယဉ်ကျေးပါရဲ့လား။ အခုတော့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ထပ်ဖြစ်တယ်။ ရှမ်းတွေကော ယဉ်ကျေးပါရဲ့လား။
ဒီအတိုင်းဆို ရှမ်းတွေလည်း လူရိုင်းတွေ ဖြစ်ကုန် ကြပါတော့မယ်။
တရုတ်မှာ ဟန်တရုတ်တွေနဲ့ ၀ိဂါ မူဆလင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ သေကြတယ်။ မီးရှို့ ဖျက်ဆီး ခံကြရတယ်။ အများကြီးပါဘဲ။ တရုတ်တွေကို မယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေ၊ အရိုင်းတွေလို့ သတ်မှတ်လို့ ရနိုင်ပါ့မလား။ အိန္ဒိယမှာ ဟိန္ဒူနဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ ဘာသာရေး အဓိဂရုဏ်းတွေ ဖြစ်နေကြတာ ခဏခဏ ပါဘဲ။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ အကြားမှာတောင် ဆိုနီနဲ့ ရှီယက် ကိုးကွယ်သူတွေ အကြားမှာ တိုက်ကြ၊ ခိုက်ကြ၊ သေနေကြတာ နေ့တိုင်းပါဘဲ။ သူတို့ကိုကော မယဉ်ကျေးတဲ့ သူတွေလို့ သတ်မှတ် ပြောဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလား။
လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အဓိဂရုဏ်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လူမျိုး တစ်မျိုး ယဉ်ကျေးတယ်၊ မယဉ်ကျေးမူ ဆိုတာနဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အဓိဂရုဏ်း ဆိုတာ လူသား မျိုးနွယ် တစ်ခုလုံးနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အဓိဂရုဏ်း ဖြစ်တိုင်း ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို အသေအချာ မလေ့လာ မဆန်းစစ်ဘဲ အရိုင်းအစိုင်းတွေ၊ လူ့ယဉ်ကျေးမူတွေကို နားမလည်တဲ့သူတွေလို့ ပုံဖေါ်စွပ်စွဲ ပြောဆိုမယ် ဆိုရင် မှားသွားနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ စွပ်စွဲမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ တရားနည်းလမ်း မကျဘူးလို့ ပြောဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု လားရှိုးမှာ ဖြစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်ပါ။ ဓါတ်ဆီရောင်းနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာ အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို မွတ်ဆလင် တစ်ဦးက ဓါတ်ဆီ သွန်ပြီး မီးရှို့တိုက်ခိုက်တယ်။ ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့ အတွက် ဆေးရုံကို အတွင်းလူနာ အဖြစ် တင်လိုက်ရတယ်။ ဒီလို ကျူးလွန် စော်ကားမူ အပေါ်မှာ ဘာသာ တူတွေက မခံရပ်နိုင် ဖြစ်ကြတယ်။ ဗလီတွေ ဈေးဆိုင်တွေကုို လက်တုန့်ပြန်တိုက်ခိုက်ကြတယ်။ ခုလို ပြဿနာမျိုး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ အများစုနေတဲ့ တိုင်းပြည် တစ်ခုမှာ ဖြစ်ကြည့်ပါလား။ မွတ်ဆလင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ဦးက ဓါတ်ဆီ သွန်ပြီး မီးရှို့ကြည့်ပါလား။ ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ( မယုံရင် စမ်းကြည့်ပါ)
ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာ အကြောင်းနဲ့ အကျိုး အစဉ် အမြဲ ဆက်စပ် ဒွန်တွဲ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာသာရေး လူမျိုးရေး အဓိဂရုဏ်းဖြစ်တိုင်း လူရိုင်းတွေ၊ မယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေ အဖြစ် စွပ်စွဲ လက်ညိုး ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးကို မယဉ်ကျေးသေးတဲ့ ကမ္ဘာအဖြစ် လက်ညိုး ထိုးကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုး တစ်မျိုး အပေါ်မှာသာ ခုလို စွပ်စွဲမူ ဝေဖန် ပြစ်တင်မူတွေ ရှိနေရင်တော့ ဒါဟာ လူမျိုးရေး အရ တမင်သက်သက် စော်ကား မူတစ်ခုလို့ဘဲ သတ်မှတ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(သတင်းအရင်းအမြစ်- နိရဉ္စရာသတင်းဌာန၊ ရေးသားသူ- ကွန်ချုပ်ကေ(စစ်တွေ)
ယခုဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာများမှာ စာရေးသူ၏ အာဘော်သာဖြစ်ပြီး ဘလော့ဂ်ရေးသူ၏ သဘောထားအာဘော်များမဟုတ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီကြီးတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်ရေး RNDP မျှော်မှန်း
မေလ ၂၇ ရက်ကနေ ၂၉ ရက်နေ့ထိ (၃) ရက်ကြာ အမ်းမြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဗဟိုကော်မီတီ အစည်းအဝေး အပြီးမှာ ရခိုင်ပြည်သူတွေ အထူး လိုလားနေတဲ့ ALD နဲ့ ပေါင်းစည်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောထားကို နိရဉ္စရာက မေးမြန်းစဉ် ဒေါက်တာအေးမောင်က ခုလို ဖွင့်ဟ ပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မေ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉ ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီဗဟိုကော်မီတီ အစည်းအဝေး မှာလည်း အဓိကတော့ လာမယ့် ၂၀၁၅ မှာ ဖြစ်လာမယ့် နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းပေါ်မှာ ရခိုင်ပြည်သူလူထု ယုံကြည် အားကိုးလောက်တဲ့ အမျိုးသား ပါကြီး တစ်ရပ် ဖြစ်ဖို့အရေးဟာ အရေးကြီးကြောင်းကို အားလုံး သဘောတူကြပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသား ညီညွှတ်ရေး ဦးတည်ချက် အရဆိုရင် မိမိရဲ့ ကိုယ်ကျိုး၊ မိမိရဲ့ ပါတီ အကျိုးထက် မိမိတို့ရဲ့ တမျိုးသားလုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကျိုးက အင်မတန် အရေးကြီးတယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်။”
ဒီလို ခံယူချက်တွေကြောင့် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ALD) နဲ့ ပေါင်းစည်းရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် ဦးဦးသာထွန်း ဦးဆောင်သော (၅) ဦးပါ ကော်မီတီ တစ်ရပ်ကို ဒီအစည်းအဝေးကနေ ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ ဒေါက်တာာအေးမောင်က ပြောပါတယ်။
“ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနော်၊ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ကာလ အပေါ်မှာ ပိုပြီး အဆင်ပြေသွားအောင် လာမယ့် ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့ မှာ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အချိန်ပေ့ါနော်၊ ဘယ်လို ဆွေးနွေးကြမယ်။ တတိယ ပါတီ အင်အားစု တစ်ခုရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ ပေ့ါနော်၊ တတိယ (Third) ပါတီ ဆိုတာကတော့ သံဃာတော်တွေ ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်။ အများ ယုံကြည်တဲ့ ရခိုင်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေမူ ကော်မီတီတွေ ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်။ ရခိုင်သဟာယ အသင်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်။ အဲဒါမျိုးတွေရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်လူထုရဲ့ လိုလားချက်အရ စဖိတ်ခေါ်တဲ့ ကျေညာချက် တစ်ခုကို ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ထုတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
ဆွေးနွေးပွဲ စတင်နိုင်ရေး အတွက် ကြားကာလ ပြင်ဆင်ရေး စတဲ့ ကော်မီတီလေးတွေကိုလည်း ဖွဲ့စည်းထားပြီး အဲဒီကော်မီက ALD ကို စာပေးတာတို့၊ တွေ့ဆုံ ညှိနိုင်းတာတွေ ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
RNDP ဗဟိုကော်မီ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး အတွင်းမှာ အမျိုးသား ညီညွှတ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောထားတွေ အပြင် ရွှေးကောက်ပွဲ RP စနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါတီ သဘောထား၊ လယ်ယာမြေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လက်ရှိ အနေအထား အပေါ်မှာ သဘောထား၊ မဒေးကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောထား၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောထား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား ကဒ် ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ နိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့ သူတွေ လွှတ်တော် အဆင့်ဆင့်မှာ ပါဝင်နေတဲ့ အနေအထားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောထားတွေကို ချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Posted by Than Htoon at 9:28 AM
(၈၅) ကြိမ်မြောက် မြောက်ဦး သျှစ်သောင်းဘုရားများ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့တွင် ကျင်းပသည့် ၈၅ ကြိမ်မြောက် သျှစ်သောင်း၊ ထုက္ကန်သိမ်၊ အံတော်သိမ် ဘုရား ဗုဒ္ဓပူဇနိ ယပွဲတော်မှာ ယမန်နေ့က အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပွဲတော်တော်ကို မေလ ၂၄ ရက်နေ့ကနေ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ၅ ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ပွဲတော်တွင် ရခိုင်ရိုးရာ ပြိုင်းလောင်းပြိုင်ပွဲ (လှေပြိုင်ပွဲ)၊ ရခိုင်ရိုးရာ ကျင်ပွဲနှင့် ဘောလုံးပွဲများကို ထည့်သွင်း ကျင်းပခဲ့သည်။
ရခိုင်ရိုးရာ ကျင်ပွဲတွင် အဆင့်အလိုက် အနိုင်ရသူများကို ဆုပေါင်း ၁၆ ဆုကို ချီးမြင့်ခဲ့ကြောင်း ကျင်ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မီတီမှ ဦးကျော်ကျော်က ယခုကဲ့သို့ပြောသည်။
“ကျင်ပွဲမှာ အားလုံးက ဆု ၁၆ ဆုချီးမြင့်ပါတယ်။ ပထမတန်းမှာ ၄ ဆု၊ ဒုတိယ တန်းမှာ ၄ ဆု၊ တတိယ တန်းမှာ ၄ ဆုနဲ့ စတုတ္ထတန်းမှာ ၄ ဆု စုစုပေါင်း ၁၆ ဆု ချီးမြင့်ပါတယ်။ ပထမတန်းက ပထမဆုကို ဌေးမင်းစိုးက ရပါ တယ်။ ဒုတိယဆုကို မောင်နိုင်ဝင်း ပေါက်တောပြင်ကရပါတယ်။ တတိယဆုကို ကျော်သန်းမြင့် ရဟတ်တောင် ကရပါတယ်။ စတုတ္ထဆုကို လပြည့်ဆိုတဲ့ ကောင်းလေးက ရသွားပါတယ်။ သူလည်း ပေါက်တောပြင်က ဖြစ်ပါတယ်။”
ကျင်ပွဲ ပထမတန်းတွင် ချီးမြှင့်သည့် ဆုများမှာ ကျပ်ငွေ ၁ သိန်းခွဲ တန်ဖိုးရှိ ရွှေသားများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒုတိယတန်းတွင် ပထမဆုကို စိုးဝင်း ကံဦးရွာ၊ ဒုတိယဆုကို ကျော်ထွန်းစိုး ပိုးရီပြင်ရွာ၊ တတိယဆုကို စစ်နိုင် ပြင်ရှည်ရွာနှင့် စတုတ္ထဆုကို ပိုးရှည်ပြင်ကျေးရွာမှ အောင်နိုင်ရရှိသွားသည်ဟု ဆိုသည်။
“ တတိယတန်းမှာ ပထမဆုကို နိုင်နိုင် မင်းပြားက ရပါတယ်။ ဒုတိယဆုကို သ်ိန်းအောင် ပေါက်တောက ရပါတယ်။ တတိယဆုကို အောင်နိုင် မင်းပြားက ရပါပြီး စတုတ္ထဆုကို အောင်အောင် ပေါက်တောပြင်က ရ ရှိခဲ့သွားခဲ့ပါတယ်” ဟု ဦးကျော်ကျော်က ပြောသည်။
စတုတ္ထတန်းမှာ ပထမဆုကို ရဲလင်းအောင် ထမရစ်ကျေးရွာက ရကြောင်း၊ ဒုတိယဆုကို ကျော်ဝင်းထွန်း အောင်မင်္ဂလာ ကရကြောင်း၊ တတိယဆုကို အေးနိုင်ထွန်း ကျောင်းတောင်ကရကြောင်း၊ စတုတ္ထဆုကို ကျော်မင်းထွန်း ရွာဟောင်းက ရရှိသွားကြောင်း သူက ပြောသည်။
ဘောလုံးပွဲတွင် နောက်ဆုံး ဗိုလ်လုပွဲကို တိမ်ညို (တောင်)ကျေးရွာအသင်းနှင့် ဘူရွက်မညှိုး ကျေးရွာအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြ ပြီး ပြိုင်ပွဲ ပြီးဆုံးချိန်ထိ တစ်ဂိုးစီဖြင့် အရှုံးအနိုင် မရှိသဖြင့် နောက်ဆုံး ပယ်နယ်တီ ဂိုးဖြင့် အဆုံး အဖြတ်ပေးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ဘောလုံးပွဲ ပထမဆုကို တိမ်ညို(တောင်) အသင်းက ရရှိသွားပြီး ဒုတိယဆု ကို ဘူးရွက်မညှိုးအသင်း၊ တတိယဆုကို ကျောက်တွင်းကုန်းကျေးရွာ ဘောလုံးအသင်းနှင့် စတုတ္ထဆုကို ဆင် အိုးကြီး ကျေးရွာအသင်းတို့ ရရှိသွားကြောင်း သိရသည်။
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က ၃၂ သင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင်စုစုပေါင်း ၅၆ သင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ (၁၂ )လံ အရှည် လှေပြိုင် ပွဲတွင် ပထမဆုကို ဆရိုက်ချောင်းကျေးရွာမှ ရရှိသွားကြောင်း သိရှိရပြီး ပြိုင်လှေပြိုင် ပွဲ အနိုင်အရှုံးများကို အသေးစိတ် သိရှိနိုင်ရန် ပြိုင်လောင်းပွဲ ကော်မီတီ ဥက္ကဌ ဦးဗိုလ်ချေကို ဆက်သွယ် ခဲ့သော်လည်း အဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပါ။
Posted by Than Htoon at 9:20 AM
စစ်တွေ ဘီလူးမချောင်းကို ကျပ် သန်း ၆၀၀ကျော် အကုန်အကျခံပြုပြင်မည်
ရခိုင်တို့ရဲ့ မြို့တော် စစ်တွေကို ဖြတ်သန်း စီးဆင်းနေတဲ့ ဘီလူးမချောင်း ရေနုတ်မြောင်းကို ကျပ်ငွေ သန်းပေါင်း ၆၇၈ ဒသမ ၃၄ အကုန်အကျခံကာ အစိုးရက ပြုပြင် တည်ဆောက်သွားမယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။
မေလ ၂၆ ရက်နေ့က စစ်တွေတွင် ရေကြီးနေကို အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ဖေါ်ပြထားစဉ်။
ဘီလူးမ ချောင်းဟာ စစ်တွေမြို့ကို ခါးလယ်က ဖြတ်သန်း စီးဆင်းနေတဲ့ ချောင်း ဖြစ်ပြီး အရင်ကတော့ စက်လှေတွေ၊ လှေကြီးတွေ ၀င်ရောက်နိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိခဲ့ပြီး အခုတော့ တဖြည်းဖြည်း တိမ်ကော လာရာကနေ ရေနုတ်မြောင်း အဆင့်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရေနုတ်မြောင်း အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ ရောက်ရှိလာခဲ့ပေမယ့် သဘာဝရေနုတ်မြောင်း ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီရေ အတက်အကျကတော့ ရှိနေသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ချောင်းဘေး ၀ဲယာတလျှောက်မှာ နေအိမ်တွေ တိုးချဲ့တည်ဆောက်လာတာတွေ ရှိသလို ပလတ်စတစ်လို စွန့်ပစ် အမှိုက်တွေကို မဆင်မခြင် စွန့်ပစ်တာတွေကြောင့် ဘီလူးမချောင်းဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိမ်ကောလာပြီး မိုးရာသီမှာတောင် ရေစီး ရေလာမကောင်းတော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ချောင်းတိမ်ကောလာတဲ့ အတွက် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းတဲ့ အခါ မြို့လယ်က လမ်းတွေမှာ မကြာခဏ ရေလျှံလေ့ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း ဘီလူးချောင်းကို ပြန်လည် တူးဖေါ်ပြီး ချောင်းဘေးဝဲယာ တစ်လျှောက် အရှည် ၁ ဒသမ ၅ မိုင်အထိ ကျောက်စီ နံရံတွေနဲ့ ခိုင်ခန့်အောင် ပြည်နယ် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်ငွေနဲ့ ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ အစိုးရ သတင်း ရပ်ကွက်က တဆင့် သိရပါတယ်။
Posted by Than Htoon at 9:17 AM
Aung San Suu Kyi called for greater solidarity to end stigma and discrimination towards people living with HIV and key populations at higher risk of infection. “Respect for the human rights of people living with HIV must be promoted,” said the Nobel Peace Prize Winner. “We also need to protect the people who live on the fringes of society who struggle every day to maintain their dignity and basic human rights. I believe that with true compassion—the invisible cord that binds us to other human beings regardless of race, personal status, religion and national borders—we can get results for all people.”
Heralding Aung San Suu Kyi’s commitment to HIV and the elimination of HIV-related discrimination, UNAIDS Country Coordinator, Eamonn Murphy, emphasized the growing momentum of the AIDS response in Myanmar. “All partners in Myanmar are working closely together to scale-up antiretroviral treatment services, with the hope to double the number of people on treatment by 2015.” He also added that Myanmar was one of the first countries to participate as an early applicant to the Global Fund to fight AIDS, TB and Malaria (Global Fund) New Funding Model. The Global Fund has initially allocated up to US$ 161 million for HIV for the period 2013-2016. Pending grant approval from the Global Fund’s Board in mid-June, the additional investments for HIV will cover high impact interventions for HIV prevention, testing and counseling and treatment.
(ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်၏ Facebook စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
Posted by Than Htoon at 12:47 PM